ချစ်ကြည်အေး: Journey Forty-Five
Thandar Lwin Tue Mar 25, 11:33:00 AM GMT+8
Sonata Cantata Tue Mar 25, 12:17:00 PM GMT+8
တရွေ့ရွေ့သွားနေသော... ကိုလည်း အခုမှ တခါတည်း တွဲဖတ်မိရက်သား အရသာ ရှိလှပါဘိတောင်း...
အမ်တီအန် Tue Mar 25, 12:46:00 PM GMT+8
ခရီးရဲ့ အပိုင်းအစသေးသေးလေးတစ်ခုအဖြစ် အတူပါခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ ကွကိုယ် ဇွတ်ယူဆမိပါ၏။
ရင်ငြိမ်းသူ (Yin Nyein Thu) Tue Mar 25, 12:54:00 PM GMT+8
ခိုင်လေး ( ရွှေတောင် ) Tue Mar 25, 01:34:00 PM GMT+8
စိတ်ကူးလေးကောင်းလိုက်တာ ။ မမ မွေးနေ့လေးမှာ စိတ်ချမ်းမြေ့ခြင်းတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ
မိုးငွေ့........ Tue Mar 25, 04:26:00 PM GMT+8
ဘ၀ဟာ ဓါတ်လိုင်းပေါ်က စကားလုံးလေးတွေလို လှပလွမ်းမောဖွယ် ချစ်ခင်ဖွယ်ရာတွေပြီးပြည့်စုံ....း)
ဓါတ်ပုံလေးတွေကိုသိပ်ကြိုက်တယ် ပန်းချီရောပဲ... ကဗျာကိုတော့ အကြိုက်ဆုံး...။
ညီလင်းသစ် Tue Mar 25, 07:37:00 PM GMT+8
အနုပညာတွေ အင်ပြည့်အားပြည့်နဲ့ ခင်းကျင်းထားတဲ့ Forty five...!
မွေးတဲ့အချိန်မှာ စတဲ့ လူ့ဘဝရယ်၊ လေးဆယ်ပြည့်မှာ စတဲ့ လူ့ဘဝရယ်လို့ ဆိုကြလေတော့ ကျနော်က အစ်မချစ်ကို နှစ်ကြိမ်တိတိ ဘဝစခဲ့ပြီးမှ သိခဲ့ရသူပါပဲ...၊း)
ဘဝဟာ ရထားတစ်စင်းလို့ဆိုရင် ဂိတ်စကနေ အတူမစီးရလည်း ကိစ္စတော့ မရှိဘူးမဟုတ်လား...၊ ကျော်ဖြတ်သွားရမယ့် ဘူတာစဉ်တွေကို ရယ်ရယ်မောမောနဲ့ ငေးကြည့်ရေတွက်နိုင်ရင်ပဲ လုံလောက်နေပါပြီလေ...။
("ဘဝဟာ..." နဲ့ အစချီတဲ့ ဝါကျတွေ ဖွဲ့ပါဆိုလို့ အိမ်စာလုပ်လာတဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့အေးအေးလူလူနိုင်မှုမျိုးနဲ့ ဒီကွန်မန့်ကို ရေးပါ၏...)း))
pandora Tue Mar 25, 07:42:00 PM GMT+8
ပျော်ရွှင်အောင်မြင်အေးချမ်းစွာ လိုချင်တာတွေ ရပါစေ မချစ်
Kay Thwel Tue Mar 25, 07:54:00 PM GMT+8
မချစ်ပေါက်.. ၄၅ ဆို ကျော်သွားပြီ။ ပျော်ရတော့မယ်တဲ့။ ( ဗေဒင်ဟောတာ)း)) ဟက်ပီဘဒ်ဒေး
Ma Tint Tue Mar 25, 08:04:00 PM GMT+8
ဆန္ဒနဲ့လက်တွေ့ အနီးစပ်ဆုံးအကောင်အထည်ဖော်နိုင်သူထဲက တစ်ယောက်အပါအ၀င်ဖြစ်တာမို့
မွေးနေ့နဲ့အတူ ဂုဏ်ယူပါတယ် မချစ်ရေ...၄၅-နှစ်တာကာလမှ ရှေ့ဆက်ပြီး ခရီးမှတ်တိုင်များစွာကို
မောင်ဘကြိုင်(ချဉ်ပေါင်ခြံ) Thu Mar 27, 08:10:00 PM GMT+8
တန်ခူး Thu Mar 27, 11:12:00 PM GMT+8
Happy belated birthday Ma yay!
thiha htun Sat Mar 29, 09:46:00 PM GMT+8
၄၅ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှသည် အေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာဖြင့် သံသရာမှလွတ်ရာလွတ်ကြောင်းတရားများပွားများအားထုတ်နိုင်ပါစေ
မြတ်ကြည် Sun Mar 30, 06:07:00 PM GMT+8
Happy BIrthday Ama :) WIsh you all the best. I wish I could look as youthful as you are when i reach 45. :)
Sint Si Fri Apr 11, 05:14:00 PM GMT+8
Happy belated birthday! All the best!!